Hooyo Gabadheeda kala dar daarmeesaa habeenka aqal galka iyo Aabe wiilkiisa siiyay fariin dardaaran habeenka aqal galka
Authors |Ayman Cade | aymancadde@hotmail.com |Wariye Gacal Xuseen Gacal|iyo waxgarad kale halkan aanan ku xusi karin|
Hooyo Gabadheeda kala dar daarmeesaa habeenka aqal galka gabadheeda (Dar daaran xiiso badan). Hooyo ayaa gabadheedii la fariisatay inta aynan guriga habeenka koowaad ee aroos-ka ah la geeynin , waxaana ay u sheegtay dardaarankani. Waxaana hooyada ay ku tiri gabadheydiyeey hadii aad iga aqbasho dardaarankan aan kuu hayo waad ku guuleysaneysaa guur-kaaga.
Marka hore , waxaad ogaataa inaad ka baxday nolol una baxday nolol kale , kan tagtay guri una guurtay guri kale , waxaad noqotaa sidii hirar-ka badda oo dabeyluhu ay rog rogayaan , waxaad-na iga fahamtaa ereyadan aan ku leeyahay
Hadii uu gacanta kuu soo taago habeenka koowaad ee aroos-ka , waxaad u muujisaa dabacsanaan , deganaansho,farxsad iyo furfurnaan. Hadii mid ka mid ah garbahaaga uu qabsado , wax wal wal ah ha dareemin.
Gabdheydiyeey ogsoonow , in jaceylku uu ka yimaado qalbiga , ee u muuji jaceyl , una noqo qof daacad ah , amarkiisa qaado , wixii uu kaa diidana ka joogso oo ha mucaaradin fikirkiisa , hadii uu qaldan yahay si degan wax u fahamsii oo u sax .
Gabaheydiyeey .. u noqo ninkaaga hooyo dhanka xanaanada ah , u noqo sidii gabar walaashii ah oo kale oo guriga la joogta, u noqo xaas gogosha ku qancisa iyo gabar isaga adeecda oo kale , fadlan faraha hala gelin wax aanu adiga ku khuseyn ,waxaad-na ahaataa qof dhoolacadeyn badan.
Gabadheydiyeey ogsoonow , inaad waqti badan ninkaaga la noolaaneysid haduu allah ogolaado , ha noqoto maamo ama bil ama sanad , waxaa intaba waajib kugu ah inaad kula noolaatid naxariis , una hugi raaxo , waayo ninka xaaslaha ah sidaa ayuu aad u jecel yahay.
Gabadheydiyeey .. waxaad badisaa ereyada macaan aad isaga ku amaaneysid sida Amiir-keyga, dooqeyga , gacaliyaheyga,macaankeyga, raaxeeyihii nolosheyda,riyadii nafteyda,ruuxii qalbigayga,ilwaad-kii quruxii indhaheyga,xabiibii ,malabkeyga iyo ereyo kale oo soo jiidan kara .
Waxaad ogaataa in waxa ugu muhiimsan uu yahay in hadalka marka uu qalbiga ka soo baxo uu ku sii dhaco qalbiga kale , ee hadalka markii aad ku dhawaaqeysid u muuji daacadnimada jaceylkaaga , hana ku caasinin amarkiisa , oo had iyo jeer isaga ka fikir oo qura .
.. waxaa jira waqtiyo muhiim ah inaad ilaalisid.. Haku qaabilin caajis hadii uu kuu yimaado isagoo faraxsan, ha u sheekeyn hadii uu kuu yimaado isagoo careysan, hadii uu kuu yeerto haku celcelin hadalka , waxaan kaaga digayaa inaad ku qaabishid dharka kushiin-ka ee wasakhda ah ,
waxaad ku dadaashaa cadayga iyo nadiifinta afka iyo udoon-ka jirkaaga , mar waliba oo uu ku arko waa inaad ahaataa qof caraf badan.
Gabadheydiyeey waxaad dha dhansiisaa ninkaaga farxadda dhabta ah , waayo wuxuu kuu noqonayaa mid si aad ah kuu jecel , kuna dadaal qubeys-ka si aad u noqotid mar waliba qof diyaar ah , goor waliba oo aad aragtid inuu ku soo eegayo , waxaad ka dhunkataa labada bushimood, sidoo kale markii aad aragto inuu ku damcayo , isaga tag wixii howl ah oo aad horey u heysay , ee ku qaabil raaxo dhameystiran.
Gabadheydiyeey .. waxaad sameysaa wixii alle iyo rasuulkiisa ay ku fareen , hana ka tagin diintaada islaamka oo raali geli ninkaaga .
Gabdheydiyeey .. waxaad eeg eegtaa inta u dhaxeysa sankiisa iyo indhihiisa , waa inuu kaa carfiyaa udgoon fiican , indhihiisuna waa inay ku dhacaan oo ay qabtaan meel qurux badan oo jirkaaga iyo guriga ka mid ah, kana ilaali wax waliba oo uu ceebeysanayo.
Gabadheydiyeey .. hadii uu kuugu yeerto gogosha ama uu kaa dalbado , u dhowow adigoo aan diidmo ka muujineynin arrintaasi , waxaad-na tusisaa galmood-ka noocyadiisa kala duwan iyo albaabada raaxada si uu had iyo jeer kuu dalbado, hadii isaga aanu dooneyn isku tegidda (jamaaca) adiga jirkaaga u muuji , kana dhunko afka , si fiican iskugu duub jirkiisa , waxaad-na xilligaasi neefsataa neef dheer .
Hadii uu kuu soo galo isagoo murugeysan , ku qaabil dhar jirkaaga uu ka dhex muuqanayo , iskuna duub , oo labada dhaban ka dhunko , oo xod xodi laab laabatada jirkiisa , la cayaar , timihiisa faraha la gal, laabtiisa(xabadkiisa) kuna badi cayaarta si ay uga baxdo murugtii iyo ciilkii horey u hayay ninkaaga .
Jaceylka aad u qabtide seygaada xooji , wax waliba oo yar , misana weyn isaga kala tasho , weligaa wax sir ah haka qarin, waxaad iskugu kala badashaa noocyo kala duwan oo cayaar ah oo ay raaxo ku jirto si aaney maskaxdiisa ugu soo dhicin wixii horey isaga murugta u keenay.
Gabdheydiyeey ogsoonow.. markii aad isaga damacdid waxaad si fiican u eegtaa indhihiisa , waayo indhaha waa hogaanka ragga .
Ha uga sheekeyn wixii uu neceb yahay , hana ku qasbin fikir aad wadatid iyo waxyaabo uusan awoodin , waxaad ka dhigtaa ninkaaga ninka ugu farxadda badan dunida marka loo eego , waayo hadii gurigiisa uu ka shaqo tago aroortii hore isagoo weji caro ay ka muuqato taasi wanaag kuuma ahan .
Gabadheydiyeey .. ha badin jil jileeca iyo dabacsanaanta oo kolkii dambe uu kuu moodo qof duleysan oo nin waliba sidan ku qaabileysa marka uu guriga ka maqan yahay , hana ku badin faanka iyo ammaanta aad u jeedineysid oo kolkii dambe uu kuugu kibro , hana ku badin su�aalaha , ha is ilowsiinin yaanu ku iloobine , waxaad-na ka noqotaa arrimahaan mid meel dhexe ka taagan .
Hooyo .. Waxaan kugu boorinayaa inaad u salaaxdid , waayo nolosha ayaa sidaa ku qurux badan sida inaad madaxiisa dhabtaada aad saarto ,gacantaadana aad mar mariso timahiisa iyo jirkiisa , waxaad-na isku daydaa inaad ku gacan siisid wax waliba oo aad awoodid .
Gabadheydiyeey .. waxaad ogaataa in galmood-ka aanu aheyn oo qura in la isku tago balse ay ka horeyso cayaartanka , ka dhunka afka , oo labada bushimood si degan uga baashiyeey ( ka dhuuq) , waxaad dha dhansiisaa candhuufta afkaaga , waxaad nuugtaa carabkiisa , kuna buuxi xaraarada jirkaaga .
Hase yeeshee galmood-ka iyo isku tegidda waa goosha dagaalka iyo ujeed-ka ugu dambeeya ee la hiigsanayo , kolka aad aragto inuu ku dhiban yahay dagaalka oo aad ka guul gaari rabtid , si adag ugu soo duub laabtaada oo ku qabo, in kabadan dhunko, ereyo macaanna ku dheh xilligaasi oo si akhlaaq ay ka muuqato sida waan ku jeclahay, adiga ayaan kuugu dhimanayaa , waad i farax gelisay, Allah ayaa ii kaa doortay, Allah ku dhowro iyo ereyo kale .
Waxaad u diyaarisaa wixii uu doonayo , gososha iyo qolkana si aad ah u carfi , dharkiisana ha noqdeen kuwa nadiif ah, naftaadana u qurxi qaabka uu isaga u jecel yahay ee uu doonayo inuu kuugu arko sida labiska iyo quruxda.
Gabdheydiyeey .. waxaan kaaga digayaa xanta iyo isku dirka dadka , waxaad ilaalisaa oo aad xafidaa sirtiisa , maalkiisa , ehelkiisa, sharaftiisa , waxaad-na badisaa allah ku xirnaanshaha .
Gabadheydiyeey .. maxaa ka qurux badan habeenka aad naftaada carfisid , qolkaaga carfisid , oo jawi degan oo aan buuq laheyn ku qaabishid ninkaaga, fadhi qurux badan , cabitaano kala nooc ah iyo codad naxariisyo ay ku dheehan yihiin, heedhe waa qurux iyo xasuus habeenkaasi
Ugu dambeyntii gabadheydiyeey .. hooyadiisa jeclaaw oo si aad ah ugu naxariiso , waxaad ninkaaga ku guursatay waa ogolaanshaha qoyskiisa , waxaad raali gelisaa isaga iyo qoyskiisa oo xiriiri walaalihiisa , una dhimri, iyagaa ku jeclaan doonee .
Gabadheydiyeey .. markale waxaan kuugu celinayaa inaad si fiican u xushmeysid hooyada dhashay ninkaaga oo jaceyl u muuji si ay kuu jeclaato , kuuguna kalsoonaato , waxaadse ogaataa in hooyooyinka marka wiilashooda ay gabdho guursadaan ay si weyn u dareemaan in kala bar jirkooda la siibtay oo uu lumay ,
laakiin adiga hadii aad tahay qof wax garad ah waa inaad isbaaradaasi kaga gudubaa naxariis iyo jaceyl , waayo kolkaas hooyadiisa waxay kuu jeclaaneysaa in ka badan sida ay wiilkeeda u jeceshahay , waxaana xilligaasi ku jeclaanaya ehelkiisa iyo tolkiisa , anna waan ku jeclahay ee sidaa ogsoonow , farxad iyo barwaaqo ayaanan kuu rajeynayaa ,hooyo guuleyso weligaa !!!Aamiin.
Aabe Wiilkiisa kala dar daarmay guurka (Waa dar daaran aad uxiisa badan
Aabe ayaa wiilkiisa oo aroos isku diyaarinayay ka codsaday inuu u yimaado si uu ula sheekeysto ka hor habeenka aqal-galka, una fahamsiiyo waxyaabo badan oo guurkiisa wanaag u ah.
Aabaha ayaa wiilkiisa siiyay fariin dardaaran ah , taasoo qof waliba oo rag ah oo guursan raba looga baahan yahay inuu ka faa�ideysto waanadan.
Wiikeygiyow, hodantinimo iyo farxad ku heli meysid gurigaaga ilaa iyo inaad iga aqbashid toban tilmaamood oo lagaaga baahan yahay inaad ku dhaqaaqdid oo aad fulisid, waxaana kaa doonayaa inaad xafido oo aad ku dadaashid.
Midda koowaad iyo labaad:. haweenka waxay jecel yihiin in la isku muujiyo , loona cadeeyo jaceylka, ee wiilkeygiyow xaaskaaga haka baqiilin inaad u bandhigtid jaceylka , hadii aad bakhiil dhankaas ka noqotid , adiga iyo iyada waxaa idin soo dhexgalaya mugdi iyo is afgaranwaa , waxaana hoos u dhacaya kalgaceylkii aad isku qabteen.
Midda sadaxaad: wiilkeygiyow haweenku waxa ay neceb yihiin ninka go�aankiisa uu adag yahay , waxayna adeegsadaan ninka laciifka ah ee jilicsan, ee tilmaan kasta waqtigeeda la imoow , waxaad �na xaaskaaga ugu baaqdaa jaceyl iyo xasilooni oo ay ku jirto deganaansho.
Midda todobaad: dumarka waxaa laga abuuray feer qaloocan, taasina waxaa ku jiray sirta quruxda iyo soojiidashada , waxaadna ogaataa in abuurka allah aanu ceeb aheyn..hadaba hadii ay qalad xun oo aan naxariis laheyn ay sameyso xaaskaaga ,fadlan iskuday inaad toosidid qalooca jira adigoo ka taxadaraya inaad jabto , waayo jabkeeda waa furiin, hadii ay qaldanto haku siideynin inay qalooca sii wadato oo uu dhibka sii kordho, ha noqonin qof dabacs
Midda sideedaad: dumarka waxaa loo abuuray inay fogeeyaan ehelka , ayna diidaan wanaaga , hadii hal waqti aad wax wanaagsan u qabatid , waqtiga xigana aad xumeysid, waxay kuugu jawaabtaa oo ay ku oraneysaa � weligaa wax kheyr ah kaama arag, iimana aadan sameyn� , hadaba waa inaad ugu dulqaadataa arrinkaasi oo aanad u moodin naceyb ay kuu qabto , kadibna aad ka carartid , hadaba wiilkeygiyow waxaan kaaga digayaa inaad degdeg ku furtid xaaskaaga oo nin kale oo arrintan raali uga noqonaya uu guursado.
Aabe waan kuu duceeyay, cadowgaaga ha jabo, weligaa guul ku waar AAMIIN AAMIIN.
Sifooyinka Haweyneeda Wanaagsan lagu xusho markaad guur doon tahay
Sidoo kale Soomaalidu ayaa waxa ay hablaha ay guursanayaan waxa ay kuxushaan qaabab gaar ah . Soomaalidu waxay tiraahdaa: (hadday naagi siddeed iyo labaatan sifo oo dumar lagu raaco leedahay, asay gabar tahay, guurkeeda sina looma daayo ee u dag daga ).
Sifooyinka dumarka lagu raaco ayaa waxa ay kalayihiin sidatan:
Afar ay u dheer tahay: labada gacmood, timaha iyo qoorta.
Afar ay deeb u leedahay: labada dibnood (bushimood) iyo labada mudane (Naasaha caaraddooda). Labay u shuban tahay: labada dhaban.
Hal ay u buuxdo: shafka oo ah meesha dumarku quruxda ka sitaan, ishuna ku nasato. Hal ay u qoran tahay: waa sanka.
Sidoo kale Carabta ayaa iyaguna waxa ay yiraahdaan
(Naag wanaaggeed ma dhamaystirna haddaanay afar u caddayn, afar u casayn, afar ciriiri u ahayn, afar u carfayn, afar u madoobayn, afar u weynayn, afar u koobaabnayn, afar u ballaarrayn, afar u jilicsanayn, afarna u yarayn).
Afarreydiina waa sidatan:
Afar ay u madowdahay: sunniyaha, timaha, indhaha iyo baararkooda.
Afar ay u jilcan tahay: sunniyada, sanka, dibnaha iyo dhexda.Hadaba mafilaayo intaas oo idili naag u dhameestiran in ay jireyso hadii ay jirta ilaah hanu beego ,Abwaan ayaa horay uyiri
Guri Bila ninkii doonayoow nacaya Goobnaarta
oo guur ujeedow imaqal waan ku garansiine
Gaduun looma Raaco Haween Gobolba waa ceynee.
Bidhaan Gabi Kalaaladaan waa lagu gulaalmaa
Isu gaadhay taa tiraah meel Un baa go'ane .
waa sax waan arin jirta ma filayo in ay jirto haween dhan walba kadhameestiran hadii ay jirtana waa ay yartahay waxaan ugu wanaagsan astaan naag lagu guursado mida diinta leh ee xijaaban qarisay laabteeda ee ragow taas ayaa aduun iyo aaqira idin anfaceysee taa udag daga oo hasii daayina .hadab aqristaha sharafta badanow markii aad aragtay qormadan iyo dulucdeeda maxaa kaaga soo baxay maxaa ka dhiamn maxaasa lagu darayaa waxyaabahan aynu soo sheegnay adiga ma qabtaa ?hadaba fikirkaag kusoo dir ciwaanka hoos kuxusan .
Guurso Gabadha aad jeceshahay Fariin kusocota Wiilasha Soomaaliyeed ee Guur Doonka ah
Guurso gabadha aad jeceshahay, Jacaylku waa dareen madax banaan oo aanan waxbo ku tiirsanayn, caashaqu waa shuruud la�aan kuma xirna inta ay la�egtahay hantida uu qofku heysto, nasabkiisa, bilicdiisa iyo jinsiyadiisa, waa sheey dabeeluhu wataan oo qalbiyada jiira.
Walloow nuxurkii laga qaaday oo maanta ay wax kasta dadka uga sahlantahay in qof lagu yiraahdo �waan ku jeclahay� iyadoo aanan la fahamsanayn micnihiisa dhabta ah, hadane waa dareen jira oo si guud loo wada aaminsanyahay, Cilmi Boodhari iyo Hodan ayaa tusaale wanaagsan u ah Jacaylka Soomaalida dhexdeeda.
Hadaba gabadha aad jeceshahay in aad guursatid waa adigoo nolosha ka gaaray hadafkii aad ka lahayd, wuxuu qofku ku helayaa qaneeco iyo niyad wanaag inta noloshiisa ka dhiman sahay u noqota, ogoow sida aan ugu baahanahay in aan caloosha quudino ayuu qalbiguna u baahanyahay qaneeco iyo laga haqabtiro waxa uu u baahanyahay, illaa inta aad ka qancineysid qalbigu waa oomane (haraadsane) una baahan in uu helo qofka uu aduunku ugu jecelyahay.
Ima aamineysid hadii aan kugu iraahdo jacaylka wuxuu ku gaarsiiyaa heer qofka aad jeceshay aad uga ba�do in aad sariirta la wadaagto marka aad is guursataan adigoo niyada iska leh waxyeelo ayaa ugu sugan, jacaylka waa loo waashaa, waa loo dhintaa, waa loo cuqdadoodaa waana loo xanuunsadaa, laakiin dad yar ayuu heerkaasi gaarsiiyaa jacaylka, in baddana iyagoo bukaan socod ah ayay noloshooda iska sii wataan haddii ay waayaan qofkii ay jeclaayeen
In yar oo raga ka mid ah ayaa naf hur u sameeya jacaylka, taasina waa sir banaanka taala, dumarkuna waxay ballo ku dhigeen waxbo sheegan maayaan,
Ogoow jacayl aanan lagula qabin mirro dhal ma ahan guurka ka dambeeya, laakiin marka aad guursatid qofka aad jeceshahay, iyaduna ku jecel waa halbeega dhadhanka macaan ee noloshu leedahay, ka fikir subixii waxaad guriga ka baxaysaa iyadoo illinka taagan oo kusoo eegeysa illaa aad ka miriq beesho, waxaad soo hoyanaysaa iyadoo illinka taagan oo ku bidhaamineysa kuna sugi la�, raashiinkii ay karisey afka meeysan saarin oo adiga ayay kula sugeysaa, marka aad raashiinka cuneysid gacantaada kuuguma aamin qabto waxay rabtaa in ay teeda kugu siiso, waxay dadaal kasta u galaysaa in ay qayaasto waxa niyadaada ku jira ee aad dooneyso ee aadan u sheegin si ay kuu farax galiso, marka aad hurdeyso mukulaasha xaafada joogta xitaa waa ogtahay kumana dhacdo in ay hurdada kaa toosiiso.
Dhuumaaleysiga guriga dhexdiisa, tartanka, orotankanka, kaftanka, kilikileynta, maada iyo qosolka, waxaan filayaa kuwiina caloosha jilicsan in ilmuhu soo dhaafeen, ilimee mise murogoow laakiin waxaan kuu sheegayaa in guur farxad la�aan ah uu yahay geed miro la�aan ah, haddii aadan guurkaaga farxad ku heysan waad abuuri kartaa farxada waana waxa ugu sahlan
Ma garanaysaa qof aduunka ugu bakhaylsan? waa kan gurigiisa farxada ka bakhayla marka uu banaanada marayana afka kala haya oo maantoo dhan qoslaya, farxadu sida macdanta dhulka ugu aasantahay oo ay ugu baahantahay in looga soo faago ayay ugu duugantahay quluubta bini�aadamka, gaar ahaan dumarka oo ragooda markasta u haya jacaylka dabiici ah .
Meeqa jeer ayaad shaqada kasoo dhuumatay oo aad xaafada usoo carartay si aad xaaskaaga waqti ula wadaagto, imisa jeer ayaad soo fasax qaadatay, imisa jeer ayaad guriga timid adiga oo gacanta dhabarka kuugu qarsantahay kadibna aad xaaskaaga kaga naxsatay ubax, faraanti mise sheey kale ood ogtahay in ay jeceshahay?, imisa jeer ayaad ku tiri �cuntadaadu aad beey u macaantahay�, imisa jeer ayaad ku tiri �aad baad u qurux badantahay�, mise ogtahay qiimaha ay waxyaalahaasi ugu fadhiyaan iyo wanaaga aad kaga kasban karto.
Haddii intaasi aan soo sheegey oo dhan aanan noloshaada laga helin labbada dhinacba, kuma doodi kartid in aad guursatay qofkii aad jecleyd, dooda ku saabsan jacaylka ma guurka hortiisaa mise waa guurka ka dib waxaan filayaa aad ila waafaqsantihiin in jacaylka guurka ka hor uu yahay buug bogiisa kore oo kaliya la aqriyey, kan guurka kadibna uu yahay buugii oo aad guda gashay akhrintiisa.
Nolosha Macaanteeda waxaad galaysaa markaad guursato tii aad Dunida ugu jecleed rabina kuugu beero Kalgaceyl baarinomo qosol farxad adigana aad sidaas oo kale unoqoto ,Maskaxdada halmar u dir hal Su'aal taas oo ah Gabadha aad jaceshahy markaad guursato iyo inanta adan garaneyn ee lagugu daro sida aad farxad ku dareemi karto ama halka aad xaal kabilaabi laheed habeenka aqal galka kadibna dib u eeg jawaabta ay niyadada kusiiso labadaa qof mida nolosha kumac ? wa su'aal kuu kaligaa jawaabtana adiga isasa sii.
Authors |Ayman Cade | aymancadde@hotmail.com |Wariye Gacal Xuseen Gacal